Designkpụrụ Imepụta Email maka 2021 | Martech Zone
Designdị Echiche Email maka 2021
Wenezdee, Machị 10, 2021 Wenezdee, Machị 10, 2021 Douglas Karr
Browserlọ ọrụ ihe nchọgharị ahụ na-aga n'ihu na-agba ọsọ ọsọ na ọhụụ ọhụrụ. Email, n'aka nke ọzọ, na-adọkpụ n'azụ ya na teknụzụ dị ka email lag na-agbaso ihe kachasị ọhụrụ na ụkpụrụ HTML na CSS.
Nke ahụ kwuru, ọ bụ ihe ịma aka nke na-eme ka ndị na-ere ahịa dijitalụ na-arụsi ọrụ ike nke ukwuu ịbụ ndị na-agbanwe agbanwe na ihe okike na iji usoro ahịa azụmaahịa a. N'oge gara aga, anyị ahụla ntinye nke gifs, vidiyo, yana emojis iji gosi ọdịiche na nkwalite ahụmịhe onye debanyere aha email.
Ndị folks na Uplers weputara ihe omuma a, 11 Email Design Trends nke ga-achị kachasị elu na 2021, na-arụtụ aka na ụfọdụ n'ime imewe mmewere mgbanwe na anyị na-ịhụ buru udi:
Obi ike podị - ọ bụrụ na ị gachara elebara anya nke onye debanyere aha na igbe nnabata mmadụ, ijikọta isi okwu ederede n’atụghị egwu nwere ike ịdọrọ uche ha.
Ọnọdụ ọchịchịrị - Sistemụ arụmọrụ agafeela n'ọchịchịrị iji mee ka nsogbu anya na ike oriri nke mkpuchi na-enwu gbaa, yabụ ndị ahịa email agafewo na ntụzi ahụ.
Etu ị ga - esi tinye ọnọdụ gbara ọchịchịrị n’ime ozi ịntanetị gị
Uri - Anya, anya anyị na-agbasoro gradients, yabụ itinye ha ka ọ dọta uche onye debanyere aha email gị nwere ike ịdọrọ uche gaa na isi okwu na oku na-eme.
Ekike Mmetụta - nwere ike ịkpalite mmetụta ziri ezi site na iji agba na onyonyo nke ọma. Ọ bụ ezie na acha anụnụ anụnụ na-egosipụta ịdị jụụ na udo, ọbara ọbara na-anọchi anya mkpali, agụụ, na ịdị ngwa. Oroma na-egosi ihe okike, ume, na ịdị ọhụrụ. Yellow, n'aka nke ọzọ, enwere ike iji dọta uche na-enyeghị akara ngosi ọ bụla.
Neumorphism - A makwaara dị ka neo-skeuomorphism, neumorphism na-eji aghụghọ dị omimi na mmetụta onyinyo maka ihe ndị na-enweghị oke-anọchi anya ha. neo pụtara nanị ihe ọhụrụ sitere na Grik neos. Skeuomorph bu okwu mejuputara nkwonkwo, nke pụtara akpa ma ọ bụ ngwá ọrụ, na morphḗ, nke pụtara ọdịdị.
Ihe ngosi ederede 2D - dinggbakwunye ederede na shading na onyonyo na ihe osise ga - ele anya na ihu nke email gị ma chee na ọkwa ọzọ site na ị nọchite anya ihe ndị ahụ. Nwere ike ịnwale ụdị ọdịiche dị iche na agba, gradients, tints, na usoro iji nyekwuo omimi na ozi ịntanetị gị.
3D Ewepụghị Images - dimmeju akụkụ na foto gị ma ọ bụ ihe atụ nwere ike ime ka email gị dị ndụ site na ime ka imepụta ihe na-emetụta. Psst… rịba ama otu m siri tinye nke ahụ na onyonyo gosipụtara na post a?
Collages nke Phantasmagoric - chịkọta bits na iberibe site na onyonyo dị iche iche n'ime otu onyonyo na-eme ka enweghị mmetụta na email ma kpalite mmasị onye ahụ.
Agba agba - Na-egbuke egbuke ma nwee agba agba abụkwaghị ọkacha mmasị nke onye debanyere aha. Ndị mmadụ agbanweela ugbua na palettes agba agba na-enweghị ntụpọ site na ịtinye agba ọcha, oji, ma ọ bụ agba ndị ọzọ agbakwunyere.
Nhazi Monochrome - Ọtụtụ mmadụ na-akọwahie atụmatụ email monochrome dị ka ojiji nke oji ma ọ bụ ọcha. Eziokwu bu na inwere ike nwalee imechi ozi email a nke ohuru n’acha gi.
Ihe ngosi - Gwakọta ike nke ihe atụ na GIF ndị na-eme egwuregwu. Ọ bụghị naanị ịgbakwunye oomph visual na ozi ịntanetị gị kamakwa gbaa ọtụtụ mmadụ ume ịgbanwe.
Nke a bụ ozi email zuru ezu na-ewu ewu infographic, jide n'aka na pịa site na isiokwu maka ahụmịhe zuru oke site na ndị enyi anyị na Uplers.
Tags: Ihe ngosi 3dIhe oyiyi 3dobi ikeagbaakụkụemail imewe na ọnọdụemail edemedeederede ederede emailimewe mmetụta uchegradientsneo-skeuomorphismneuphormismcollage phantasmagoricudidiederede ederedendị uplers
Enterprise Social Media Marketing Platform Atụmatụ
Nyochaa software, Ndụmọdụ, Nkọwa, na saịtị Nchọpụta (65 Resources)